Su'aalaha la isweydiiyo - Hebei Zifeng New Energy Technology Co., Ltd.
Agabka Guriga ee Guriga
Ku rakibida Badhida-Alxanka
Flanges Steel Carbon
Malleable Iron tuubooyinka rakiban
Ibta Birta Iyo Godadka
Qiimayaashayadu waa la beddeli karaa iyada oo ku xidhan sahayda iyo waxyaabaha kale ee suuqa. Waxaan kuu soo diri doonnaa liiska qiimaha la cusbooneysiiyay ka dib markii shirkaddaadu nala soo xiriirto si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Miyaad leedahay tiro dalab ugu yar?
Haa, waxaan u baahanahay dhammaan amarada caalamiga ah inay lahaadaan tiro dalabka ugu yar ee socota. Haddii aad raadineyso inaad dib u iibiso laakiin aad u tiro yar, waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso websaydhkeena
Ma siin kartaa dukumentiyada la xiriira?
Haa, waxaan bixin karnaa dukumiintiyada ugu badan oo ay ku jiraan Shahaadooyinka Falanqaynta / Ku -habboonaanta; Caymis; Asalka, iyo dukumiintiyada kale ee dhoofinta markii loo baahdo.
Muunadaha, waqtiga hogaamintu waa qiyaastii 7 maalmood. Soosaarka baaxadda leh, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood ka dib marka la helo lacag-dhigashada. Waqtiyada hogaamintu waxay wax ku ool noqdaan marka (1) aan helnay deebaajigaaga, iyo (2) aan haysanno oggolaanshahaaga ugu dambeeya ee alaabtaada. Haddii waqtiyada hoggaamineed aysan ku shaqeyn waqtigaaga kama dambaysta ah, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibintaada. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonaa inaan daboolo baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Waa maxay noocyada hababka lacag -bixinta ee aad aqbasho?
Waxaad ku bixin kartaa koontadayada bangiga, Western Union ama PayPal:
30% deebaaji hore, 70% dheelitir ka dhan ah nuqulka B/L.
Waa maxay dammaanadda badeecaddu?
Waxaan damaanad qaadeynaa alaabtayada iyo farsamooyinkayaga. Ballan -qaadkayagu waa qanacsanaanta alaabtayada. Damaanad -qaadid iyo in kale, waa dhaqanka shirkadeena in wax laga qabto oo la xaliyo dhammaan arrimaha macmiilka si qof walba ugu qanco
Miyaad dammaanad qaadaysaa gaarsiinta alaabta si ammaan ah oo sugan?
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa baakadaha dhoofinta oo tayo sare leh. Waxaan sidoo kale u adeegsanaa xirxirida halista khaaska ah alaabada halista ah iyo kuwa xamuulka kaydinta qabow ee la ansixiyay ee alaabada xasaasiga ah. Baakadaha takhasuska leh iyo shuruudaha xirxirida ee aan caadiga ahayn ayaa laga yaabaa inay qaadaan kharash dheeraad ah.
Ka warran khidmadaha dhoofinta?
Qiimaha dhoofintu waxay ku xiran tahay habka aad u dooratid inaad alaabta u hesho. Express caadi ahaan waa habka ugu dhaqsaha badan laakiin sidoo kale ugu qaalisan. By xeebta badda waa xalka ugu fiican ee xaddi badan. Qiimaha xamuulka sida saxda ah waxaan ku siin karnaa oo kaliya haddii aan ognahay faahfaahinta xaddiga, miisaanka iyo habka. Fadlan nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
CINWAANKARm501, Dhismaha Shenglun, Heping West Road, Shijiazhuang, Hebei, Shiinaha
WAQTIGA SHAQADA08:30 ~ 17:30 Maanta ilaa Sabtida